Yonke into oyifunayo kufuneka ube ne-aquarium yamanzi yetyuwa | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Amanzi olwandle
Unokuthatha isigqibo sokuba nokuba unamanzi acocekileyo okanye i-aquarium yetyuwa. Ukuba ukhetha okokugqibela, kuya kufuneka wazi ukuba iimpawu azifani. I-aquarium yamanzi yetyuwa ifuna ukhathalelo olwahlukileyo kunamanzi amatsha. Ukongeza, uya kudinga olunye uhlobo lwe Izityalo zasemanzini neentlanzi ezifanelekileyo kumanzi anetyiwa.
Ufuna ukwazi Yonke into oyifunayo kufuneka ilungile i-aquarium yakho yetyuwa? Qhubeka ufunda, kuba le yiposti yakho 😉
1 Ukufakwa kweTyuwa yamanzi eetyuwa
1.2 Ukucoca amanzi ngetyuwa
1.3 Izifudumezi ze-Aquarium kunye neempompo
1.4 Ityuwa yolwandle
2 Izityalo zamanzi anamanzi anetyuwa
2.1 Ukutsheva ibrashi
2.2 I-bubble algae
2.3 Iletisi yolwandle
2.4 Ufudo lokhula
3 Intlanzi ye-aquarium yolwandle
3.3 Intlanzi yotyando
3.4 Ingelosi yentlanzi
Ukufakwa kweTyuwa yamanzi eetyuwa
Ukufakwa kolu hlobo lwe-aquarium kufuna ukuba indawo nganye eyenzileyo ichazwe. Ke ngoko, sizahlulahlula ukwakhiwa kwe-aquarium kwinto nganye ebalulekileyo kwaye sichaze iimfuno.
Umazantsi we-aquarium yolwandle kufuneka uvumele indawo eyoneleyo yeekoloni zebacteria ye-aerobic. Ezi bhaktheriya kufuneka zabelane ngendawo kunye nezo anaerobes eziya kufumaneka kulwandle.
Eyona nto ifanelekileyo yolwandle isanti ekrwada yekorale. Ezi zinto zisivumela ukuba sibe nomxholo ophezulu wekalika, osinceda sizinzise i-pH. Ukongeza, isinika isitayile esihle sokuhombisa kunye nendalo.
Kuxhomekeke kuhlobo luni lweentlanzi onazo, uya kudinga ezantsi okanye enye. Umzekelo, kwezi ntlanzi ze-oda yePerciformes, umhlaba oyisanti uyafuneka. Ezi ntlobo zizogquma ngesanti kwindawo yazo yokuphumla ebusuku. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba, ngaphambi kokufumana uhlobo lwentlanzi, sazi iimfuno zalo ezisisiseko.
Ukucoca amanzi ngetyuwa
Ukucoca ubumdaka obuqokelelwa kwii-aquariums ziyafuneka Iifilitha ezikhethekileyo zamanzi anetyuwa. Ezi zihluzo ziya kuba nakho ukugcina amasuntswana amakhulu kunalawo amanzi amatsha. Iifilitha kufuneka zicocwe rhoqo ukunqanda ukungcoliseka kwamanzi e-aquarium ngalo lonke ixesha. Kukucoca kuphela okucocekileyo, sinokwenza ukuba ihlale ixesha elide kwaye igcine amanzi ecocekile.
Ngakolunye uhlangothi, akufuneki sicoce ngokugqithileyo isihluzo kuba siya kuthintela ukusekwa kweekoloni zebhakteria.
Izifudumezi ze-Aquarium kunye neempompo
Uhlobo ngalunye lweentlanzi lufuna ubushushu obuthile. Umzekelo, ukuba sifuna ukuba ne-aquarium yamanzi yetyuwa yeentlobo zeetropiki siya kuyidinga isifudumezi-thermo. Oku kusetyenziselwa ukunyusa ubushushu bamanzi kule nto ifunwa ziintlanzi. Ngale ndlela baya kuba nakho ukuphila ngokuchanekileyo kwaye bangabinangxaki kwaphela.
Iimpompo zamanzi Zezona ndawo zibalulekileyo kwi-aquarium yolwandle. Yeyona inikezela ngemisinga yamanzi eyimfuneko yokuphinda indawo yokuhlala elwandle. Iintlanzi zifuna le misinga ukuba "izive isekhaya." Iimpompo kufuneka zibekwe ngendlela yokuba kungabikho ndawo zinamanzi amileyo. Kuya kufuneka uzame ukuba nomda ofanayo kuyo yonke i-aquarium.
Kuba ukusebenzisa amanzi olwandle endalo kunzima kakhulu, kuyafuneka ityuwa yolwandle. Amanzi olwandle e-aquarium kufuneka alungiselelwe ukusetyenziswa Ukuguqula amanzi osmosis kunye netyuwa elwandle. Oku kwenza ukuba iimeko ngaphakathi kwi-aquarium zizinze ngakumbi kwaye azivelisi umahluko omkhulu. I-SERA yolwandle ityuwa ine-homogeneity egqwesileyo kwaye inyibilika ngokukhawuleza kwaye ingenantsalela, ivelisa amanzi acwengileyo e-crystal.
Izityalo zamanzi anamanzi anetyuwa
Izityalo esiza kuzibeka kwi-aquarium yamanzi yetyuwa zifuna ukhathalelo oluthile. Ayilulo naluphi na uhlobo lwesityalo sendalo oluya kwenza. Uhlobo ngalunye lwesityalo lufuna itanki yentlanzi efanelekileyo. Kufuneka sibala umthamo we-aquarium eyimfuneko ukuze zombini izityalo kunye neentlanzi zingaphazanyiswa ".
Nalu uluhlu oluncinci lwezona zityalo zintle zamanzi anetyuwa.
Ezi zityalo zinesinye esifana nebrashi yomchebi. Ziluhlaza ngombala kwaye amagqabi awo anentsiba. Ikhula ngcono kwiindawo ezinesanti kwaye yenza phakathi kwe-3 kunye ne-4 intshi ngonyaka. Bangumbono olungileyo wokudibanisa nentlanzi ye-perciform order efuna isanti. Ezi zityalo zifuna ukukhanya okukhulu kunye nokuhamba kwamanzi okuphakathi.
Ezi zi-algae ngamanye amaxesha zithathwa njengenkathazo kuba, ukuba i-aquarium ayigcinwanga ilawulwa kakuhle, iyabahlasela. Nangona kunjalo, ukuba uneliso elibukhali, zinokuba sesinye sezona zityalo zibalaseleyo zamanzi anetyuwa.
Ngulwelwe oluhlaza olusebenza njenge ukutya kwentlanzi e-herbivorous and omnivorous. Makhulu, anamagqabi ajikeleziweyo kunye noburhabaxa bawo bungqwabalala. Benza njengesihluzo sebhayiloji kuba iyanceda ekupheliseni iitrate kunye neephosphates eziyingozi. Ilettuce yolwandle ingatyalwa emazantsi e-aquarium okanye ishiywe ukuba idadayo ngokukhululekileyo.
Esi sityalo saziwa ngegama leenwele zobuntombi. Ngulwelwe oluhlaza oluneentsiba kunye nemisonto emilise okwetyhubhu. Ukukhula kwayo kufikelela kwii-intshi ezi-6 ngonyaka. Inokutyalwa elunxwemeni lolwandle kwaye ikhule ngamanqatha. Ikhupha ityhefu ethi, ngelixa ingenayo ityhefu, yomelele ngokwaneleyo ukuba ithintele iintlanzi ekutyeni isityalo.
Intlanzi ye-aquarium yolwandle
Njengezityalo, iintlanzi zamanzi zetyuwa azidingi kukhathalelwa ngokufanayo neentlanzi zasemanzini. Nalu uluhlu lwezinye iintlobo zamanzi anetyuwa.
Olu luhlobo Kucetyiswa kakhulu ii-newbies kwii-aquariums zamanzi anetyuwa. Bangama-7 cm ububanzi kwaye bodwa. Ziqhelana ngokulula nemeko-bume, ke azidingi kukhathalelwa. Zindawo ezithile kunye nezinye iintlanzi, kodwa aziniki ngxaki.
El iklownfish Yintlanzi edume kakhulu ngegama layo kunye nomzimba wayo onemibala. Kuyacetyiswa ukuba kwezi ntlanzi, emazantsi e-aquarium yikhorale. Zingqongqo ngakumbi kubushushu bamanzi. Banokuba nobundlongondlongo kwezinye iintlobo.
El intlanzi yotyando Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kwaye unokufikelela kwi-40 cm ubude. Zithandwa kakhulu nangona ukhathalelo lwazo luyinkimbinkimbi. Ukuba sisihlandlo sokuqala ukuba ube ne-aquarium yamanzi yetyuwa, le ntlanzi ayikhuthazwa. Ihlala kwiingqaqa kwaye ifuna ukukhanya okukhulu kunye nobushushu obuzinzileyo.
El Ingelosi yentlanzi yenzelwe abanini abanamava. Banokufikelela kwi-30 cm ubude kwaye bodwa. Ziqhelana kakuhle nee-aquariums kwaye zifuna ubungakanani obukhulu. Ukuba banyanyekelwa kakuhle, banokuhlala ukuya kwiminyaka eli-10.
Ikhithi esisiseko yamanzi anetyuwa Ixabisa malunga nama-euro angama-80. Ukuba ucinga ukuseta i-aquarium yakho okokuqala, kungcono ukhethe izixhobo zokuqala.
Ngolu lwazi uya kuba nakho ukulungiselela i-aquarium yakho yaselwandle kunye nolona hlobo lucetyiswayo lweentlanzi kunye nezityalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Ityuwa yamanzi eselwandle